စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ်က အင်္ဂလန် ဂိုးမုန်တိုင်း ၊ ဇလာတန် ရဲ့ ပထဆုံး O.G ၊ စနေည ရဲ့ ဟက်ထရစ်ရှင်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ်က အင်္ဂလန် ဂိုးမုန်တိုင်း ၊ ဇလာတန် ရဲ့ ပထဆုံး O.G ၊ စနေည ရဲ့ ဟက်ထရစ်ရှင်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
October 24, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ နောဝှစ်ချ် စီးတီး အသင်းကို ၇-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ ထူးဆန်းစွာနဲ့ ချဲလ်ဆီး ဘက်က ဂိုးသွင်းသူတွေရော နောဝှစ်ချ် ဘက်က O.G သွင်းပေးသူပါ အင်္ဂလန်သားတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး အတွက် မေဆင်မောင့် က ဟက်ထရစ် သွင်းခဲ့ပြီး ချေဝဲလ် ၊ ရစ်ဆီဂျိမ်းစ် နဲ့ ဟတ်ဆန်အိုဒွိုင်း တု့ိက ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူပေး ခဲ့ကြပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး ကလည်း အဝေးကွင်းမှာ ဘရိုက်တန် ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဖီးလ်ဖိုဒန် အကောင်းဆုံး ကစားကာ ၂ ဂိုး သွင်းယူ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နည်းပြသစ် ရာနီရေးနီ ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ပွဲမှာတော့ ဝက်ဖိုဒ့် ဟာ အဲဗာတန် ကို ၂-၁ နဲ့ အရေးနိမ့် နေရာကနေ မိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ၄ ဂိုး ပြန်သွင်းကာ ၅-၂ ရလဒ်နဲ့ အနိုင် ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဝက်ဖိုဒ့် အတွက် တိုက်စစ်မှူး ဂျို့ရှ် ကင်း က ဟက်ထရစ် သွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ အေစီမီလန် ဟာ ဘိုလော့နာ အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၄-၂ နဲ့အနိုင် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ ဘိုလော့နာ ဘက်က ၂ ယောက် အနီကတ် ထိခဲ့ပြီး ၈၃ မိနစ် အထိ ၂-၂ နဲ့ သရေ ကျနေခဲ့ ပေမယ့် အဆုံးသတ် မှာတော့ အေစီမီလန် တို့ နိုင်ပွဲ ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ အေစီမီလန် တိုက်စစ်မှူးကြီး ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ် ဟာ သူ့ရဲ့ ရှည်လျားလှတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားဘဝမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် O.G သွင်းယူ မိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဇလာတန် ဟာ ၉၀ မိနစ် မှာတော့ အေစီ အတွက် စတုတ္ထ မြောက် ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျာမန် ဘွန်ဒစ်လီဂါ မှာတော့ ဘိုင်ယန် ရော ဒေါ့မွန် ပါ နိုင်ပွဲတွေ ရခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘိုင်ယန် ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဟော့ဖမ်ဟမ်း ကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဒေါ့မွန် ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ အာမေးနီးယား အသင်းကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဘရွန်း နဲ့ ဘရစ်စတိုး စီးတီး အသင်းတို့ရဲ့ ကစားပွဲဟာ ပွဲမစမီ တကြိမ် ၊ ပထမပိုင်း မှာ တကြိမ် ၂ ကြိမ် တိုင် ပွဲကြည့်စင်ပေါ်က ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့် ရပ်နား ခဲ့ရတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဇနီးသည် ဝမ်ဒါ နာရာ နဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ခဲ့ အပြီးမှာတော့ တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီ ဟာ မာဆေး နဲ့ ကစားမယ့် PSG အသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာ ပြန်လည် ပါဝင် လာခဲ့ပါပြီ လို့ နည်းပြ ပိုချက်တီနို က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကာဒစ် စီးတီး အသင်းကတော့ နည်းပြ မစ် မက်ကာသီ ကို ထုတ်ပယ်ပြီး လက်ထောက် နည်းပြ တယ်ရီ ကော်နာ ကို ယာယီ ကိုင်တွယ် စေလိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလတည်းက ဒဏ်ရာကြောင့် နားနေရတဲ့ ဝုဗ် အသင်းရဲ့ အားထားရတဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ပက်ဒရို နက်တို ဟာ လာမယ့် အပတ်ထဲမှာ ပေါ်တူဂီ ကို ပြန်ကာ ဒဏ်ရာကို ဆရာဝန် နဲ့ ပြသ သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပေါ်တူဂီသား ဟာ ဝုဗ် အတွက် ပြန်ကစားပေးဖို့ အလားအလာ မရှိသေးဘူးလို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူးလေး ဒိုင်ဘားလား ဟာ အင်တာမီလန် နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲ အတွက် လူစာရင်းမှာ ပါဝင် လာခဲ့ ပေမယ့် အခြားတိုက်စစ်မှူး တဦး ဖြစ်တဲ့ မွိုက်စ် ကင်း နဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရာဘီယော့ တို့ကတော့ ပါဝင် မလာနိုင်သေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဖလား ကို ၃ ကြိမ် ဆွတ်ခူး ဖူးတဲ့ တဦးတည်းသော ဘောလုံးသမားဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီး ဘောလုံး ဂန္ထဝင်ကြီး ပီလီ ဟာ ယမန်နေ့က အသက် ၈၁ နှစ် ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ Happy Birthday Pele
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက အီတလီ အာဏာရှင် မူဆိုလီနီ ရဲ့ မြစ်ဖြစ်သူ ရိုမာနို မူဆိုလီနီ ဟာ ဒီတပတ် ကစားမယ့် လာဇီယို အသင်းကြီးရဲ့ လူစာရင်းမှာ ပါဝင် လာခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကိစ္စ အပေါ် ဖက်ဆစ် အလေးပြု ပုံသဏ္ဍန် နဲ့ အော်ဟစ်ကြွေးကြော်မှု ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့ လာဘ်ကောင် လင်းယုန်ငှက် ရဲ့ လေ့ကျင့်သူ ဂျူအန် ဘာနာဘီ ကို အလုပ်ကနေ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article အဲဗာတန်နဲ့ ပွဲစဥ်အပြီး လူတွေ ဝေဖန်စရာဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ အပြုအမူ အကြောင်းကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
Next Article ချဲလ်ဆီးတို့ နောဝှစ်ချ် ကို ဂိုးပြတ် ချေမှုန်းခဲ့ပြီးနောက် ၊ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ့် အသင်းကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ခရစ် ဆပ်တန်